Sawirro: Cali Guudlaawe oo kulan la yeeshay FAHAD - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Cali Guudlaawe oo kulan la yeeshay FAHAD
Sawirro: Cali Guudlaawe oo kulan la yeeshay FAHAD
Beledweyne (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka HirShabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe) ayaa xalay kulan foolka fool ah la yeeshay la-taliyaha amniga qaranka, Fahad Yaasiin oo shalay gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Kulanka ayaa waxaaa goobjoog ahaa madaxweyne ku xigeenka HirShabelle, Yuusuf Dabageed, halka Fahad Yaasiin uu wehlinayey xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo gacan yare u ah.
Qoraal kooban kasoo baxay madaxtooyada HirShabelle ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Beledweyne, kadib booqasho uu ku tegay Fahad Yaasiin oo ah haatan ah musharax xildhibaan oo u taagan kursiga HOP#086.
“Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa caawa Madaxtooyada Magaalada Beledweyne waxaa ku soo booqday Lataliyaha Amniga Qaranka Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ahna Musharax Xilibaan Golaha Shacabka,” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka HirShabelle.
Madaxtooyada HirShabelle, ma faah faahin waxyaabaha kale ee ay ka wada-hadleen labada dhinac, marka laga reebo in kulanka uu ahaa mid booqasho ah, sida ay shaacisay.
Shirka kadib ayaa la soo bandhigay sawirrada uu Fahad la galay madaxda HirShabelle, isaga oo shantii sano ee la soo dhaafay aan kasoo muuqan kulamada noocaan oo kale ah.
Doorashada kursiga uu tartamayo ninkan oo ay si weyn isugu hayaan Rooble ayaa waxaa hareeyey dood xoogan, waxaana markale guddiga doorashooyinka ku celiyey in aan hadda la qaban karin doorashada kursigan oo uu horey ugu fadhiyey Faarax Sheekh Cabduqaadir.
Si kastaba, doorashada ayaa lagu wadaa inay qabsoonto saacadaha soo socda ee maanta, maadaama shalay shahaadada uu qaatay Fahad Yaasiin oo doonayo inuu ku biiro baarlamaanka 11-aad ee dalka, isaga oo u tartami doono guddoomiye ku xigeenka 1-aad.